Gabaygii wuu dhintay . – WELCOME TO AUTHOR SAED ISMAIL H.AWED OFFICIAL WEBSITE.
Gabaygii wuu dhintay .
In kasta oo uu gabaygu qiimahaa sare ee aynu ka hadalnay weligii lahaa haddana isaga ayaa maansada soomaalida ugu adag marka ay tahay curinta. Wuxuu ka kooban yahay beydad isku miisaan iyo isku qaafiyad ah. Miisaanku waa dhererka ereyada iyo shaqallada ku jira.Qaafiyadduna waa xaraf beydka labadiisa qaar meel xaddidan joogto uga gelaya. Haddii ay ereyada beydku intii loo baahnaa ka dheeraadaan ama ka gaabtaan, iyo haddii xarafka qaafiyadda laga tago ama meel qaldan la geliyo, beydku wuu jabaa, waxaana lagu magacaabaa ”deelqaaf”. Qaafiyaddu waxay noqon kartaa kow iyo labaatanka shibbane mid uun, ama shanta shaqal oo isku qaafiyad ah. Miisaanka beydku wuxuu ku sar go’an yahay hab-dhaca caanka ah ee ah:
Guud ahaan marka maansada laga hadlayo waxaa aynu had iyo jeer maqalnaa wax loo yaqaan “deelqaaf”. Haddaba taasi waa maxay? Intii aan far soomaalida la qorin xuruufta carabiga ee Qur’aanka lagu baran jirey ayaa la yaqaanney laguna dhaqmi jirey. Sidaa darteed ereyga deelqaaf wuxuu sida muuqata ka yimid labada xaraf ee carabiga ah ee d(deel) iyo q (qaaf). Ujeeddaduna malaha waa: maansada jaban ee aan qaafiyad iyo miisaan ku soconi waxay la mid tahay iyada oo isla maanso keliya loo wada qaatay labada xaraf ee diyo q. Waayo qaafiyaddu waa in ay ahaataa xaraf keliya. Haddaba waxaa laga yaabaa markii u horraysey ee uu ereyga deelqaaf baxay in ay ahayd mar uu qof soo bandhigay tix ku wada socota labada xaraf ee d iyo q, dabadeed lagu dhaliilay: tixdaadu waa deel-qaaf. Ka dibna ay sidaa ku hirgashay.
Waxaynu kale oo og nahay in xarafka d ee carabiga ah aan gadaal xaraf kale lagaga dari karin. Sidaa darteed waxaa laga yaabaa in loo jeedo: maanso aan ereyadeeda iyo qaafiyaddeedu isu dheelli tirnayni waxay la mid tahay d (deel) oo gadaal lagaga daray q(qaaf), taas oo aan bannaanayn.
Sidii aynu aragnay beydka tixdu wuxuu ka samaysan yahay ereyo isu dheelli tiran oo isku mar go’aya, oo bixiinaya dhadhan muusig ah, kaas oo ah waxa koowaad ee ka dhigaya tix.Bal arag kala duwanaanta tix iyo tiraab isku macne ah. Cilmi-Boodhari:
Cudurka gabayga dilay
Waxaa kale oo hubaal ah labada qaafiyadood ee xaraf iyo miisaan in aanay gabayga soomaaliga guul iyo wanaag u ahayn, ee ay u yihiin dhibaato iyo carqalad horumarkiisa hor taagan. Dad badan oo gabyi lahaa ayey arrintaasi hakisay, wax badan oo laga gabyi lahaa ayey baajisay, gabay badan oo la tiriyey ayeyna ragaadisey. Sababta oo ah qofka damca in uu tix gabay ah curiyo khasab waxaa ku ah in uu yaqaan xeerarkii aynu soo aragnay oo aan murti badni iyo dareen fogaan ahayn ee ereyo dhisid uun ah. Waxaa kale oo khasab ku ah xarafka uu qaafiyadda u doortay in uu ka yaqaan kana xasuusto ereyo aad u badan. Isla markaas in uu ereyo badan oo dantiisa iyo dareenkiisa ku habboon uga tago qaafiyad ama miisaan la’aan, kuwo kale oo qashin ahna urursado.
Taariikda Af- soomaaliga .